प्रधानमन्त्री कै अगाडी चर्काचर्की गर्ने सरकारका दुइ मन्त्रि बिमलेन्द्र र महरालाई एमाले उपाध्यक्ष रावल र ज्ञवालीले यसरी लागाय ठिक! – ZoomNP
प्रधानमन्त्री कै अगाडी चर्काचर्की गर्ने सरकारका दुइ मन्त्रि बिमलेन्द्र र महरालाई एमाले उपाध्यक्ष रावल र ज्ञवालीले यसरी लागाय ठिक! प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर ०६, २०७३ समय - १५:३८:४३ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा आइतवार बसेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको बैठकमा चर्काचर्की परेको छ । बैठक सुरु हुनसाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीमाथी धावा बोलेका थिए । ‘तपाईका कारण पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन, अझै भूकम्प पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्, असफलता तपाईको हो की सरकारको ?’ बैठकमा सिइओ ज्ञवालीप्रति धावा बोल्दै निधिले भने ‘तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न भने अझै राजीनामा दिनुस् ।’